Mid ka mid ah murashaxiinta guddoonka PUNSAA la ogaaday in uu yahay sarkaal dawladeed iyo guddiga doorashada oo ka doodaya caddaymo loo soo gudbiyey. – Radio Daljir
Mid ka mid ah murashaxiinta guddoonka PUNSAA la ogaaday in uu yahay sarkaal dawladeed iyo guddiga doorashada oo ka doodaya caddaymo loo soo gudbiyey.
Juunyo 2, 2011 12:00 b 0
Garoowe, June 02- Guddiga KMG ah ee doorashada hoggaanka dalladda PUNSAA ayaa qabsaday mid ka mid ah murashaxiinta u tartamaysa jagada guddoomiyaha dalladda kaddib markii la ogaaday in uu yahay shaqaale dawladeed.
Nuur Maxamed Nuur oo ka mid ahaa murashaxiinta u loolamaysa hoggaanka ugu sarreeya ee dalladda aan dawliga ahayn ee PUNSAA gaar ahaan jagada guddoomiyaha ee labada sano ee soo socda ayey mugdi-galiyeen guddiga doorashadu sharaci ahaansha u tartamidda xilka guddoomiyenimo kaddib markii qaar ka mid ah cod-bixiyayaashu guddiga ay hor-geeyeen qoraallo lagu xaqiijinayo ka mid ahaanshihiisa shaqaalaha dawladda Puntland.
Nuqullada qoraalladaasi oo ay warbaahintu heshay ayaa tilmaamayaa Nuur Maxamed Nuur in uu yahay sarkaal ka tirsan wasaaradda caafimaadka ee dawladda Puntland, uuna yahay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Qardho ee xarunta gobolka Karkaar, taasoo aan ku bannaanayn xeer-hoosaadka lagu dhaqo dalladda PUNSAA.
Guddiga doorshada ayaa hakad-galiyey jadwal-qoraaleed loo dajiyey habsami-u-socodka doorashada laguna cayimay xilliyada is-muujinta murashaxiinta iyo cod-bixinta si ay xal kama danbays ah uga gaaraan qoraallada loo soo gudbiyey ee muranka galinaya murashaxnimada Nuur Maxamed Nuur.
Shir ay albaabbadu u xiran yihiin oo ay galeen guddiga doorashada iyo xeer-beegti ka mid ah kor-joogayaasha shirka iyo xubno waayo aragnimo loo xushay oo ka mid ah dalladda PUNSAA ayaa wali socda, kaasoo lagu damacsan yahay in lagu gaaro go’aamo la xiriira arrinta muranka dhalisay, mana cadda xilliga rasmiga ah ee ay soo bandhi-doonaan go’aamadooda.
Radio Daljir.t> http://daljir.com/
?Tayada iyo tirada ciidanka daraawiishta iyo kuwa booliska gobolka Sanaag aad bay u liitaan? Taliyaha qaybta Sanaag, Gashaanle Guuleed,
Baahin: Arbaca, Jun 01, Weriye C/risaaq Juba ~ Daljir ~ Bossaso. Tukaraq & dhulkii dagaallada ka dhaceen 30-kii bishii May oo deggan; C/llahi Yusuf, madaxa Kastamka Tukaraq ayaan waraysanay … “Waxa dagaalameyey waxaa ay ahaayeen xoogaga xoraynta SSC” Col. Cali Sabarey … ?Waa qayru mas?uulnimo xun in SSC ay sheegato dagaalkii ka dhacay duleedka Tukaraq? Axmed Cilmi Cismaan ?Axmed Karaash? … Wasfti uu hogaaminayo Shariif Xasan, afhayeenka baarlamaanka federaalka ah oo u dhoofay Uganda …